Umkhiqizi we-aquarium thermometer yedijithali yedijithali DS-1
Usayizi esewonke: 46.5mm x 27.5mmx 29.5mm
Ububanzi besilinganiso sethempelesha: -50℃~ 70℃
Isixazululo ℃ (> -20 ℃); ℃ (okunye)
Umqondo omusha wokuklama i-solar thermometer ye-digital DST-50
Ukunikezwa kwamandla: iphaneli elanga nebhethri eyisipele ye-LR44
Ukunemba: 1 ℃ (-20 ℃ ~ + 80 ℃);
+ 3 ℃ (-50 ℃ -20 ℃ + 80 ℃ + 150) isikhathi sokusampula: imizuzwana eyi-10
Ukushisa kwemvelo okusebenzayo: -10 ℃ ~ 60 temperature Ukushisa kokugcina: -20 ℃ ~ 70 ℃
Inzwa yethempelesha L = 17 mm x D = 5mm
Isibonisi se-LCD esinophenyo olugoqekayo, isakhiwo esingenamanzi;
Ukucisha ngokuzenzakalela ngemizuzu eyi-10 ngaphandle kokusebenza;
Irekhodi lokushisa okukhulu; Linganisa kabusha umsebenzi;
Isikhathi sokuphendula esisheshayo esingu-4S, futhi phinda / vula iphenyo ukucisha / ukuvula i-thermometer.
I-thermometer yangaphakathi ne-hygrometer ngaphandle komugqa wenzwa i-JDB-60
Linganisa futhi ubonise ukushisa nomswakama wasendlini ngokuzenzakalela ngekhanda amanani we-max / min wokushisa nokushintshwa komswakama wasendlini phakathi kwe-℃ / ℉ clock function kanye nokwethusa ukusebenza kwamanani wekhalenda;
Ifanele ukugcina okubandayo, ukugcina impahla, ikhaya, ihhovisi nezinye izindawo zokusebenzisa.
I-220V ye-thermometer ye-elekthronikhi yezimboni i-JDP-200 yefriji
Ukushisa okukhulu kwe-LCD nokubonisa umswakama ngephaneli yangaphakathi.
Izinga lokushisa lesilwane nomswakama i-thermometer ye-elekthronikhi JW-6
Isisindo esikhulu: 30g
Usayizi womkhiqizo: 45 * 15.5mm
Material: plastic igobolondo ABS
Ububanzi besilinganiso sethempelesha: -50～70 ℃
Iphutha lokukala: ± 1 ℃
Ububanzi bokulinganisa ibanga 20%～90%
Ukulungiswa kokubonisa umswakama 1%
Ukunemba kwesilinganiso somswakama ± 5%
Umjikelezo wesampula yomswakama amasekhondi ayi-10 (iminithi eli-1)
Amandla kagesi alinganiswe ngo-DC1.5v (1 AG13 noma ibhethri lenkinobho engu-LR44)
Isimiso sokusebenza: isibonisi sokushisa se-thermistor ukuguqulwa
Ukulinganisa imitha lokushisa ngaphakathi nangaphandle nomswakama JW-100A
Uplink khombisa ithempelesha yasendlini nomswakama, i-downlink khombisa ithempelesha yangaphandle nomswakama;
Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu neliphansi kakhulu endlini kanye nenani lomswakama lingasetshenziswa ukuqeda izinga lokushisa eliphakathi nendawo kanye nomswakama omkhulu;
Cindezela i-MAX / MIN / RESET (IN / OUT);
Kwangathi ume phezu kwetafula, nakho kungaxhoma udonga.
Isibonisi se-LCD sesilwane esishisayo sedijithali ST-1A
Ithempelesha yokukala ibanga: -50 ℃～ ＋110 ℃ (-58 ℉～ ＋230 ℉)
Ukunemba kwesilinganiso sethempelesha: ± 1 ℃
Khombisa isinqumo: ℃
Usayizi womshini: 55mm × 42mm × 16mm
Uhlobo lwenzwa nobude: inzwa ye-thermistor, ubude bekhebula imitha eli-1
Sebenzisa imvelo: izinga lokushisa: 0 ℃～ ＋60 ℃; umswakama: 20%～85%
Imodi yokunikezwa kwamandla: ibhethri lenkinobho (LR44, 1.5V).
Ukuhlinzekwa kwefektri yokuzalela i-thermometer yedijithali ST-2
Ukulinganisa / ukuphuma kokushisa komnyango;
Ukubonisa umsebenzi wewashi;
Idizayini yegobolondo le-Ultra slim.
I-thermometer ye-elektroniki yokukala izinga lokushisa kwethangi lenhlanzi ST-3
Usayizi wokubonisa: ubude be-58mm, ububanzi be-36mm, ubukhulu be-11mm
Ubude bengxenye ye-probe: cishe i-90mm
Ububanzi besilinganiso sethempelesha: -50 ℃ - + 60 ℃
Ukunemba: + -1 ℃
Sebenzisa ukushisa kwemvelo: -10 ℃ - + 50 ℃
Sebenzisa ibhethri: ibhethri lebhathini 1.5V
Shintsha ukhiye: VULA / VALA;
Ukhiye wokuguqula iyunithi lokushisa: ℃ / ℉;
Uphenyo lwensimbi engagqwali olungu-135mm;
I-thermometer yekhishi lakho、ilabhorethri、ifektri noma i-BBQ.
isilawuli sokushisa se-incubator, i-aquarium thermometer yedijithali, isilawuli sokushisa se-thermostat, i-thermometer yedijithali, ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo, isilawuli se-digital thermostat,